Guddiga ayaa magacaabay xubin cusub | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Agoosto 27 , 2021
Christopher Kunze ayaa loo xushay inuu buuxiyo kursi furan oo ka mid ah guddiga dugsiga illaa doorashada gaarka ah la qabanayo bisha November. Kursiga waxaa horay u hayey Liz Weisberg, oo iscasilay horaantii xagaagan. Kunze waxaa loo dhaarin doonaa dhaarinta xafiiska kulanka guddiga Oktoobar 7, ka dib 30 maalmood oo loo baahan yahay si loo codsado.
Doorasho gaar ah oo ah kursi ka haray 1 sano oo haray ayaa la qaban doonaa November 2. Laba murashax, Donald Hovland iyo Pete Kelzenberg, ayaa u tartamaya kursiga furan. Qofkii ku guuleysta doorashada gaarka ah wuxuu xafiiska la wareegi doonaa bartamaha bisha Nofembar.